FAAHFAAHIN: Madaafiic lagu weeraray aqalka madaxtooyada xilli madaxweynuhu saaladdii ciida tujinayey.
Puntlandtimes (Kabul)-Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya madaafiic lagu weeraray aqalka madaxtooyada Afghanistan ee Kabul intii lagu jiray salaadda ciidda Muslimiinta ee Ciidul Adxaa iyadoo salaadana Iimaam ka ahaa Madaxweynaha wadankaas Ashraf Ghani.
Kadib weerarkaani waxaa madaxweyne Ashraf Ghani uu sii watay salaada in kasta oo qaraxyo badan oo xoogan ay ka dhaceen meel aan ka fogeyn madaxtooyada, waxaana ay soo dheceen 8-da subaxnimo (03:30 GMT) ayaa laga maqlay guud ahaan aaga cagaaran ee aadka loo ilaaliyo oo ay ku yaalliin qasriga iyo dhowr safaaradood, oo ay ku jiraan howlgalka Mareykanka.
Ghani ayaa markii dambe khudbad ka jeediyay fagaaraha banaanka, oo laga sii daayay warbaahinta gudaha. Afhayeenka wasaarada arrimaha gudaha Mirwais Stanekzai ayaa sheegay in ay gantaalo gaaraya saddex ay cadowga Afghanistan ku weerareen caasimada Kabul, wuxuuna caddeeyey inaysan jirin wax khasaare ah oo ay geysteen gantaaladan sida uu sheegay afhayeenka u hadlay xukuumada Afghanistan.
Guud ahaanba wadanka Afgaanistaan waxaa ka socda weeraro xooggan oo ay qaadayaan xoogaga Taalibaan iyada oo ciidamada shisheeye ay ka bixitaankooda la qorsheeyay in la soo gabagabeeyo 31 Ogosto.
Cinwaankan kuwa wax lagu daabto (clickbait) kuwa ugu xariifsan ayuu noqday, waayo waxaan hubaa in akhriste kasta oo indhaha saara uu Farmaajo oo wax tujinayay umaleynayo!
1. “xilli madaxweynuhu saaladdii ciida tujinayey”
Oo kuwa isaga ku dabatukanayay oo imaamka kadhigtay miyay waalnaayeen mise qori baa dhafoorka lagaga hayay?
2. “Kadib weerarkaani waxaa madaxweyne Ashraf Ghani uu sii watay salaada in kasta oo qaraxyo badan oo xoogan ay ka dhaceen meel aan ka fogeyn madaxtooyada”
Wax aan innaba macquul ahayn qawsaar cilmaani ah ayay taasu kasuurowdaa. Haddii uu madaxweyne Taalibaan ah yahay haa, waa la rumaysan lahaa; haddase waa war lagu qoslo.
Sikastaba, wararka noocan ah ee loogutalagay in waddan kale shacabkiisa laguseexiyo la iska masooqaato Puntland Times.